Sidee baan ku awoodi karaa inuu wareejiyo Data From Old Phone u macruufka New iPhone carar 9
Iyadoo Apple soo bandhigi ay update cusub ee macruufka ah, wax badan oo dhan aad ah isku dayi doona in ay casriyayso ka hore iPhone, iyo qaar ka mid ah oo idinka mid ah dadka isticmaala android daacad oo keliya ugu danbeyn ku biiro in ay la kulmaan waxa lagu update ugu weyn ee macruufka ilaa Taariikhda. In this article, waxaan Hubi in aad taqaanid wax walba oo loo baahan yahay in aad kala guurka si aalad iOS9 karti fududayso ka dhigi doonaa.
Qaybta 1. Transfer oo dhan 1 click (laga heli karo macruufka / Android / Symbian in macruufka)
Mid ka mid ah suuqa kala iibsiga xogta ugu caansan Softwares halkaas, MobileTrans ka dhigaysa mid aad u fudud oo dhan, waayo, waxaad si ay u gudbiyaan warbaahinta. Tani waxay ka mid noqon kara wax walba oo xiriir si qoraal fariimaha iyo xitaa warbaahinta kale oo ay ku jiraan sawiro, muusig iyo cajallado fiidyow. Xataa waxaad awoodi karaa inuu wareejiyo barnaamijyadooda kala duwan oo u dhexeeya iPhone iyo Android oo Systems kale Operating ay ku jiraan OS sida jirka sida Nokia (Symbian) phones- in kaliya click ah!
Iyadoo Wondershare MobileTrans waxaa lagu gartaa ay xarunta siman wareejinta xogta, waxaa jira Koox ka mid ah qaababka kale si sugaynaa in:
• Ku hay ammaan xogta telefoonka: Dhamaan xogta muhiim ah in aad la hayn karaa xaqiijisatay aad kombuutarka, haddii aad isticmaalayso ah iPhone, Android ama Nokia.
• Haddii aad bedesheen ka telefoonka ah oo gaboobay in iPhone ama Android, software kuu ogolaanaysaa inaad soo ceshano hayaan abuuray by MobileGo, Samsung Kies iyo Suite Blackberry Desktop.
• software ka dhigayaa ma aha oo kaliya songs, laakiin playlists oo dhan laga soo gudbo Lugood si kala duwan ee wax soo saarka tufaaxa, iyo sidoo kale in ay telefoonada android .
• Haddii aad qabto gurmad iCloud ah, waxaad si fudud u awoodi karaa inuu wareejiyo si aad android, hubsada in mid ka mid ahaa sawiro aad qaali u ah ama xiriir muhiim lumin.
3.481.314 oo qof ayaa u soo bixi
Talaabooyinka si ay u gudbiyaan xogta la isticmaalayo Wondershare MobileTrans
Tallaabada 1 - Tag wondershare.com/phone-transfer oo guji waxaa isku dayi button lacag la'aan ah. Waxa kale oo aad fursad u haysataa in ay soo iibsato software ah ka dib haddii aad dooneyso in aad.
Tallaabada 2 - Ku rakib file ka soo dejisan iyo furi software Wondershare Mobiletrans ah. Waxaad arki doontaa wax interface ah sida ku cad sawirka hoose.
Riix 'Phone inay kala iibsiga Phone' badhanka si aad u bilowdo.
Tallaabo 3 - Connect aad iPhone / Android phone in PC iyo sugto software si ay u muujiyaan on interface ka. Phone Isha la soo bandhigi doonaa bidixda halka phone caga lagu soo bandhigi doonaa oo Midigta. Waxaad ka badalan karaa labada si fudud adiga oo riixaya badhanka laalaabma dusheeda.
Tallaabo 4 - Hubi xogta aad u baahan tahay in ay ka guuraan aad telefoon cusub si aad telefoon jir. Sida kor ku xusan, waxaad wareejiyo aad xiriirada, fariimaha qoraalka ah, abuse, iyo wax badan oo dheeraad ah. Oo markii aad samaysay, riix batoonka yar buluug hoos ku qoran liiska hubinta. Haa, waa sahlan in!
Talaabada 5 - Just dib jiifsaday, oo daawado sida xogta la wareejiyo ka iPhone in qalab Android aad. Sida xogta ay si toos ah wareejiyo, aadan xitaa u baahan internet ah oo loogu talogalay nidaamka.
Waxa kale oo aad marna masixi karin xogta aad jir , kaas oo noqon kara run ahaantii waxtar leh haddii aad ka fekereyso inaad iibiso telefoonka jir.
Just guji 'masixi xogta hore phone' button aad ku interface bilowga arkay soco adigoo gujinaya ah 'hadda masixi' button. Waxay qaadan kartaa muddo ah, laakiin mar haddii la sameeyo, waxaa laguu xaqiijin karaa in macluumaadkaaga shakhsiyeed ma dhici doonaan gacmo khalad ah.
Qaybta 2. xogta Transfer ka macruufka in macruufka isticmaalaya Lugood
Habka labaad waa wax yar lengthier badan Wondershare sida ay ku lug leedahay taageero ilaa xogta ka dibna u soo celinta cusub aad iPhone, laakiin kaliya waa sida wax ku ool ah. Halkan sida aad u samayn:
Tallaabada 1. Isku aad iPhone in computer iyo furi Lugood, sidoo kale waxaa muhiim ah in aad isticmaasho nooca ugu dambeeya ee software-ka.
Tallaabada 2- Click magaca ama icon ee qalab aad.
Tallaabada 3- Marka hore, dooro "kombuyuutarka" doorasho ku column bidix, ka dibna riix "Haatan ilaa" doorasho ku khaanadda saxda ah.
Tallaabada 4. Haddii aad doonayso inaad ilaaliso gurmad ah, si fudud u calaamadi sanduuqa "gurmad sir iPhone 'doorasho iyo dooran sirta ah.
Tallaabada 5- Haddii aad rabto in lagu xaqiijiyo gurmad ah in aad abuuray inaan, guji doorasho Device ku hoos aad rabtid. Waxaad arki doontaa liiska hayaan abuuray ay taariikhda iyo waqtiga.
Tallaabada 6. Hadda si loo soo celiyo xogta aad ku saabsan telefoonka cusub, kaliya in la hubiyo in qalabka aad soo celinta xogta waa cusub ka badan qalab il aad.
Tallaabo 7 - Connect cusub iPhone in computer iyo furi Lugood.
Tallaabada 8- Marka aad riix magaca qalabka, oo dhan ee aad u baahan tahay inaad samayso waa dooro 'Soo Celinta kaabta' doorasho ee column hayaan, oo ugu dambeyntii kaliya dooran gurmad si loo soo celiyo.
Tallaabada 9- Dooro gurmad ah in aad hore u abuuray, oo aad tahay qof wanaagsan si ay u tagaan.
Qaybta 3. xog Transfer ka macruufka in macruufka isticmaalaya iCloud
Tani waa markii geedi socodka si caddaalad ah oo ka yar Cunidda badan oo isticmaalaya Lugood. Si kastaba ha ahaatee, waxaad u baahan tahay xidhiidh wifi si aad u hesho inta badan ka soo baxay waxaa ka mid ah.
Tallaabada 1 - On hore iPhone, la abuuro gurmad ah oo ku saabsan iCloud si fudud looga faa'idaysan badhanka ee kaabta in iCloud.
Tallaabada 2 - Ka dib markii aad gurmad dhamaystiran tahay; kaliya eegno waqtiga hore ee kaabta. Tani waa uun tallaabo uga digayna, si loo hubiyo in uu ahaa xogta aad taageeray wax ku ool ah.
Tallaabo 3 - Waxaan sameeyey oo la gurmad ah. Hadda, si loo soo celiyo xogta aad on in iPhone cusub oo dhalaalaya, awoodda aad jir iPhone hore. Guul daraysto in taas loo sameeyo waxay keeni kartaa in khilaafaadka la hayaan ee ku saabsan iCloud.
Tallaabo 4 - On shaashadda soo dhaweyn ah oo cusub oo aad iPhone, xulo dalka, luqadda, iyo network wifi aad.
Talaabada 5 - Marka aad samayn la, shaashadda soo socda aad arki doonaa fursadaha sida hoos ku qoran. Dooro ikhtiyaarka waydiinaya inaad si loo soo celiyo ka kaabta iCloud.
Tallaabada 6 intiisa kale -Madaxweynaha waa log si cadaalad ah easy- shubo xisaabta iCloud iyo ku heshiiyaan in ay shuruudaha iyo xaaladaha.
Tallaabo 7 Taladii shaashadda soo socda, dooro gurmad aad u abuuray oo keliya on hore iPhone iyo iska taabto uun fursad u Soo Celinta.
Talaabadani waxay qaadan kartaa muddo ah. Laakiin si degdeg ah xiriir aad internet yahay, ka dhakhso badan ay noqon doontaa nidaamka.
Tallaabada 8 -Once loo sameeyo, aad iPhone bilaabi doonaa oo aad leedahay doonaa dhammaan macluumaadka ku yaal aad xoojiyaa.
> Resource > iPhone > Sidee ayaan u bedeli karaa xogta laga Old Phone si iPhone Cusub macruufka carar 9 via iClou